Ikhaya » Iindaba zoMsebenzi woHamba » IHolland America Line irhoxisa iNieuw Statendam kunye neVolendam yaseYurophu yokuhamba ngenqanawa ehlobo
Iindwendwe okwangoku zibhukishwe kwiNieuw Statendam kunye neVolendam yokuhamba ngokuzenzekelayo ziya kusiwa kuhambo oluya kwi-2021 e-Eurodam kwiMeditera, ukuqala ngo-Agasti 15 ukuya ku-Okthobha u-30 owela i-transatlantic.
I-Eurodam igcina ixesha elisandula ukwaziswa ngeMeditera ngo-Okthobha
INieuw Statendam kunye neenqanawa zaseVolendam ziya kucinywa
Ixesha lokuhamba ngenqanawa laseRotterdam latshintsha
Nakuba I-Holland America Line Iyaqhubeka nokusebenza noorhulumente kunye nabasemagunyeni kwizibuko ngokunxibelelene nokuqala kwakhona kokuhamba ngenqanawa, iyarhoxisa intsalela yehlobo lowama-2021 oomama baseYurophu ababekhwele kwiinqanawa ezimbini, iNieuw Statendam kunye neVolendam. Oku kuchaphazela ukuhamba ngenqanawa okucwangciselwe ukuba kusuka ngo-Septemba ukuya ku-Novemba, kunye nohambo lwabaqokeleli (uhambo oluhlanganisiweyo) olunxulumene nolo hambo.
Ukongeza, emva kokufika kweeshedyuli okulindelweyo ukusuka kumzi-mveliso weenqanawa waseFincantieri nge-30 kaJulayi, iRotterdam iya kuhlala ingekho kwiindwendwe kude kube ngumhla wama-26 kuSeptemba ovela eAmsterdam, eNetherlands. Izicwangciso zomsitho wamagama waseRotterdam ziyagqitywa.
Iindwendwe zihanjiswe ngenqanawa yaseYurophu ngo-2021 okanye ngo-2022
Iindwendwe okwangoku zibhukishwe kwiNieuw Statendam kunye neVolendam yokuhamba ngokuzenzekelayo ziya kusiwa kuhambo oluya kwi-2021 e-Eurodam kwiMeditera, ukuqala ngo-Agasti 15 ukuwela i-transatlantic ka-Okthobha, kwaye ufumane i-30 yezigidi kwi-Onboard Spending Credit ngomntu ngamnye.
I-Nieuw Statendam kunye neendwendwe zeVolendam nazo zinokukhetha ukuhamba ngolwandle olulinganayo ngo-2022 ngexabiso lokuya ku-2021 okanye zifumane iKhredithi yeCrise Cruise eyi-110% yayo nayiphi na imali ehlawulwayo eya kuthi ibekwe kwiakhawunti yokunyaniseka kwendwendwe.
Iindwendwe ezibhukishwe ngoku kuhambo olurhoxisiweyo lwaseRotterdam zisenokukhetha ukuhamba ngomkhumbi ngokulinganayo ngo-2022 kumrhumo ka-2021 ohlawulelweyo, okanye banokukhetha ukufumana iKhredithi yeCrise Cruise eyi-110% yayo nayiphi na imali ehlawulweyo.
Nawuphi na undwendwe kuhambo olurhoxisiweyo unokucela ukubuyiselwa imali epheleleyo yazo zonke iimali ezihlawulwe eHolland America Line.